bihani – Page 355 – Bihani Online
यी पाँच प्रकारका व्यक्तिसँग कहिल्यै साथी नबन्नुस्, नत्र दुस्ख पाउनुहोला
२८ भाद्र २०७३ १०:३६ September 13, 2016 bihani
मानिस सामाजिक प्राणी हो । आमाको गर्भबाट भूइँमा झरेसँगै ऊ विभिन्न भूमिकामा परिभाषित हुन्छ । कसैको छोरा(छोरी, भाइ(बहिनी, नाति(नातिनी आदि । जब ठूलो हुँदै जान्छ, अनि रगतसँग कुनै साइनो नजोडिएकाहरु पनि उसको जीवनमा जोडिन आइपुग्छन्, साथीको रुपमा ।साथीको सम्बन्धलाई पवित्र र मनको नाताको रुपमा बुझ्ने चलन छ । कतिपय साथी यति फलदायी हुन्छन् नि, उनीहरुको […]
भीख नमाग्नुहोला, फास्ट ट्रयाक आफैँ बनाउनु पर्छ : प्रचण्डलाई बाबुरामको सुझाव
२८ भाद्र २०७३ १०:३३ September 13, 2016 bihani
काठमाडौं, भदौ २८ नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा। बाबुराम भट्टराईले आर्थिक विकासका लागि भारतसँग भिख अनुदान नमाग्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ । आज पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको छलफलका क्रममा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट १० बुँदे पत्र बुझाउँदै भट्टराईले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । आर्थिक विकास निम्ति विदेशीसँग भीख माग्ने युग पुरानो भइसक्यो । अब […]
यसकारण अडिँदैन महिलाको पेटमा कुरा, अनुसन्धानले पत्ता लगायो तथ्य
२८ भाद्र २०७३ १०:२५ September 13, 2016 bihani
हामी सबैलाई थाहा छ, महिलाहरु कुनै पनि कुरालाई लामो समयसम्म छिपाइराख्न सक्दैनन् । ‘अरुलाई नभन्नु नि १’ भनेर कसैले सुनाएको कुरा उनीहरुले कोही न कोही आफ्नो विश्वासपात्रलाई भनेरै छाड्छन् । यसरी गोप्य कुरा कसैलाई चुहाउने उनीहरुको नियत त पक्कै पनि हुँदैन । तर, यस्ता कुरा एक न एकजनालाई नभनी बस्न सक्ने धैर्यता पनि पाइन्न । […]
यी हुन् यौन सम्पर्कको बेला पुरुषले गर्ने ६ गल्तीहरु
२८ भाद्र २०७३ १०:०८ September 13, 2016 bihani
पुरुष र महिला दुवैका लागि शारीरिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ । मानसिक प्रेमले मात्रै संसार चल्दैन, अपूरो रहन्छ । यसर्थ शारीरिक प्रेम पनि जीवनको अभिन्न अंग हो । तर यौन सम्पर्कको बारेमा पुरुषहरु बढी आक्रामक हुने गर्दछन् र उनीहरुले केही गल्ती पनि गर्न पुग्दछन् । आउनुहोस्, सेक्सका बेला पुरुषले गर्ने ६ गल्तीहरुको बारेमा थाहा पाइराखौं । […]
मनबाट हटाउन मुस्किल यौनसम्बन्धी आठ मनगढन्ते कुरा
२८ भाद्र २०७३ १०:०६ September 13, 2016 bihani
यौन संसारकै सबैभन्दा चर्चित शब्द हो । यसमा संसारका ९९ प्रतिश मानिसको चासो हुन्छ । यसका बारेमा केही मानसहरुको धारणा विज्ञानको अनुसन्धानले गलत सावित गरिदिएको छ । तर, यसबारे धेरै कुरा मानिसहरुले मनदेखि नै जानेका हुन्छन् । यौनका बारेमा त्यस्ता केही चीजहरु छन्, जो मानिसहरुका मनगढन्ते गफ हुन् । समलिंगीको कुनै जिन हुँदैन संसारमा मानिसको […]
तपाइँ कुन बार जन्मिएको रु त्यसबाट थाहा पाउनुस् यी चामत्कारिक तथ्यहरु
२८ भाद्र २०७३ ०९:५९ September 13, 2016 bihani
ज्योतिष विज्ञानअनुसार बारका आधारमा व्यक्तिको स्वभाव फरक(फरक हुन्छ । आज हामी बार अनुसारको व्यक्तिको स्वभावबारे बताउँनेछौ‌ं । आइतबार १. आइतबार जन्मेका व्यक्ति सकारात्मक सोच र निकै विश्वसनीय हुन्छन् । २. अन्तर्मुखी हुने भएका कारण थोरै साथीहरु हुन्छन् । ३. निकै संवेदनशील र कसैले भनेको कुरालाई धेरै दिनसम्म मनमा लिइरहने खालका हुन्छन् । ४. चिन्तन शक्ति […]
एक हप्ताभित्र मर्ने थाहा पाए के गर्नुहुन्छ रु’ साधु र चेलाको रोचक प्रसंग
२८ भाद्र २०७३ ०९:५० September 13, 2016 bihani
कुरा आदिम समयको हो । साधु तुकाराम आफ्नो आश्रममा बसिरहेका थिए । उनका एकजना रिसाहा चेला साधुको नजिक आए र भने, ‘गुरुजी, तपाई कसरी आफ्नो व्यवहार यति हार्दिकतापूर्ण बनाउन सक्नुहुन्छ रु न तपाईं कोहीसँग रिसाउनु हुन्छ न अरुको बारेमा कुरा काटेर समय बिताउनुहुन्छ रु कृपया तपाईंको यस्तो असल व्यवहारको रहस्य बताउनुहोस् ।’ साधुले भने, ‘मलाई […]
बुढेसकालमा छुट्टिनुपर्दा रोइरहेका वृद्धदम्पतीको कथा
२८ भाद्र २०७३ ०९:४७ September 13, 2016 bihani
ह्वील चेयरमा बसिरहेका वृद्ध दम्पति । ८३ वर्षीय वोल्फ्राम गटसल्क र उनकी पत्नी ८१ वर्षीय अनिता । क्यानडाको एक वृद्धदम्पत्ती ६२ वर्षदेखि सँगै थिए । एउटै वृद्धाश्रममा कोठा नपुगेपछि उनीहरु छुट्टिएर बसिरहेका छन् । उनीहरू छुट्टाछुट्टै वृद्धाश्रममा बसिरहेका छन् । यो वृद्ध जोडीको कथा(व्यथा जब उनीहरूकी नातिनीले सार्वजनिक गरिन्, तब यी वृद्ध जोडीको तस्बिर भाइरल […]
युवतीबारे यी पाँच कुरा जान्न हतारिन्छन् युवकहरु
२८ भाद्र २०७३ ०९:४५ September 13, 2016 bihani
युवतीहरुलाई लिएर युवकहरुमा हमेशा केही न केही जिज्ञासा हुनेगर्छ । खासगरी जुन युवतीप्रति ऊ गम्भीर छ, वा आफ्नो भविश्य देखेको छ, उनका विषयमा त चासो हुने नै भयो । यस्ता उत्सुकताका झलकहरु तपाइँले पनि महसुस गर्नुभएको हुनसक्छ । अफिस वा कलेजमा जब कुनै नयाँ युवती आउँछिन्, तब युवकहरु उनको रिलेशन स्टाटस जान्न हतारिन्छन् । युवतीको […]
यी गुण भएका महिलाका पतिहरु भाग्यमानी हुन्छन्’
२८ भाद्र २०७३ ०९:४२ September 13, 2016 bihani
चर्चित धार्मिक ग्रन्थ श्रीरामचरितमानस विभिन्न भाषामा धेरै लेखकद्वारा लेखिएका छन् । यसमध्ये गोस्वामी तुलसी दास तथा बाल्मिकीद्वारा लिखित श्रीरामचरितमानस निकै चर्चित मान्य छ । बाल्मिकी रामायणको एक प्रसंगमा रावणको अशोक वाटिकामा त्रिजटासँग माता ‘सीता’ भन्छिन्, ‘मेरो अंग लक्षण यस्तो छ कि, मेरा पतिको राज्याभिषेक निश्चित प्रायस् छ, उहाँ सम्राट बन्नुहुन्छ । सीतासँग त्यस्तो के लक्षण […]
१जापानमा कोरोनाका कारण १०८ जनाको मृत्यु: संक्रमीतको संख्या ४७ सय ९६ पुग्यो
२जापानका ७ प्रान्तमा आपतकालीन घोषणा गरिने “लकडाउन भने होईन”
३जापानमा कोरोनाको कहर: १०४ को मृत्यु, ४५ सय ६० जना संक्रमित
४कक्षा १२ र एसईईको परिक्षा बैशाखमा संगै हुने
५फुकुओका विषेश: १ सय ४६ जना संक्रमित, १ को मृत्यु
१फुकुओकामा कोरोनाका कारण १ जनाको मृत्यु : संक्रमितको संख्या ११९ पुग्यो
२फुकुओका विषेश: १ सय ४६ जना संक्रमित, १ को मृत्यु
४जापानका ७ प्रान्तमा आपतकालीन घोषणा गरिने “लकडाउन भने होईन”
५जापानमा कोरोना लागेर ८३ जनाको मृत्यु : संक्रमितको संख्या ३४८१ पुग्यो
जापानमा कोरोनाका कारण १०८ जनाको मृत्यु: संक्रमीतको संख्या ४७ सय ९६ पुग्यो
२५ चैत्र २०७६ ०२:३० April 7, 2020 bihani
जापानका ७ प्रान्तमा आपतकालीन घोषणा गरिने “लकडाउन भने होईन”
२४ चैत्र २०७६ १७:२० April 7, 2020 bihani
२४ चैत्र २०७६ १०:२२ April 6, 2020 bihani
कक्षा १२ र एसईईको परिक्षा बैशाखमा संगै हुने
२३ चैत्र २०७६ १८:३८ April 5, 2020 bihani